Filtrer les éléments par date : samedi, 06 juin 2020
samedi, 06 juin 2020 15:05
Vakinankaratra: Mpiasa 3 000 isa amina orinasa afakaba ho very asa ato ho ato
Mpiasa manodidina ny 3 000 isa no fantatra fa hiato amin’ny asany manomboka ny 15 Jona ho avy izao. Orinasa afakaba isany lehibe eto Antsirabe renivohitr’i Vakinankaratra ity hampiato ny mpiasa ao aminy ity, vokatry ny fihibohana noho ny valan’aretina Covid-19.
Fantatra mantsy fa tsy afaka manondra sy mandray famandriahana asa avy any ivelay intsony ny orinasa ka tsy maintsy hiato, ka olona manodidina ny 700 eo ho eo sisa no hampihodina sy hanao izay asa kely mbola tsy vita, kaomandy efa nialohan’ny fihibohana.
Raha ny fanazavana avy tamin’ireo mpiasa ihany dia io 15 Jona io no miato avokoa ny mpiasa rehetra aloha ka mialohan’ny fankalazana ny fetim-pirenena ny 22 jona no miverina avokoa, ary mivoaka ny lisitry ny mpiasa 700 sisa ho tazonina, ary ireo miato kosa dia homena fanomezana toy ny fanao isaky ny fetim-pirenena.
samedi, 06 juin 2020 10:04
Mety mahasoa anao: Ahoana ny dosage ciment
Matetika rehefa manao trano na misy zavatra madinika atao dia tsara ny mahafantatra ny momba ny asa atao, na ho fanaraha-maso na ho fanamarinana ny tolo-bidy na devis omen'ny maçon.
Ny ciment raha tsotsorina dia lakôly mampitambatra briky na vato na fasika.
Misy karazany maro izany ny ciment arakaraky ny zavatra tiana atao.
Misy ciment ampitambarana briky na mety andalorana ihany koa na ametahana carreau.
Ny lalotra dia fasika madinika voasivana no atambatra amin'ny ciment, sady anome endrika ny trano no hiaro amin'ny rano na orana ( Étanchéité). Raha toerana mando lava, na siniben-drano na piscine na tongotra tetezana milona rano, na barrage, na tata-drano dia misy produit anampy ny ciment toy ny sikalite, na misy karazana ciment natokana amin'izany.